IPATIO EPHATHEKAYO EKHANYIWEYO (ISIKHOKELO SOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Ipatio ephathekayo eKhanyiweyo (Isikhokelo soYilo)
Ipatio ephathekayo eKhanyiweyo (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokuyilwa kwekhonkrithi esikhonkxiweyo kubandakanya ukuba yintoni, indleko kunye nantlukwano vs iipati zekhonkrithi ezinamabala.
Ipatio yekonkriti epholisiweyo izisa ukuhlala kwakho ngaphandle kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo ekulula ukuligcina kwaye lichase ukunxiba okubonakalayo kunezinye izinto eziqhelekileyo zepatio.
Ngaphaya koko, ipatio ekhonkrithiweyo ekhonkxiweyo inokuba yindawo ephantsi xa isetyenziswa ngengubo enganyangekiyo nokuba imanzi, ukuyenza ibe yindawo ekhuselekileyo yomgangatho weendawo zakho zangaphandle.
Yintoni ikhonkrithi ekhazimlisiweyo?
Izinto eziluncedo eziphathekayo
Iindleko zePatio ephathekayo
Iindleko eziPhathekayo zeKhonkrithi ngeenyawo zenyawo nganye
Umahluko phakathi kweKhonkrithi eGciniweyo kunye nePolisi
Ngaba ikhonkrithi ephihliweyo yePatio ekumgangatho otyibilikayo xa imanzi?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba kugqitywe iiPatio eziPhathekayo?
Ngaba Umgangatho Owenziwe Ngekhonkrithi Ukulungele?
Ukugqitywa kwekhonkrithi okukhazimlisiweyo kuxa umgangatho wekhonkrithi nokuba sele ukhona okanye isandul 'ukunyanga ikhonkrithi iye yacolwa ngomatshini, yaqaqanjiswa, yaza yapholiswa ngendlela ukuze kufezekiswe inkangeleko enqwenelekayo.
Inkqubo eyahlukileyo inokuvelisa i-matte, i-satin kunye nokugqitywa kwe-gloss kusetyenziswa i-gras efanelekileyo ye-abrasives yedayimane. Ngokubanzi, i-slab ekhonkrithi isezantsi isebenzisa i-50 grit ukuya kwi-400 grit yentsimbi ebotshiweyo yedayimani kuxhomekeke kwis sheen oyifunayo.
I-hardener yemichiza iyasetyenziswa ukuqinisa umphezulu wekhonkrithi ukuphucula ukuzinza kunye nokunxiba ngelixa kusenziwa umphezulu ongatyibiliki. Emva koko, ipolishiwe nge-resin ye-resin-bond diamond. Umphezulu ngokuqhubekayo olukhazimlisiweyo kunye buffed ukuphumeza umgangatho umphezulu efunekayo.
Inkqubo yokupolisha imigangatho yekonkrithi yenza ukuba indawo yomelele ngakumbi, iphindaphindwe kalishumi ubunzima ukusuka kwifom yayo engakhange ipolishwe. Oku kuyenza ukuba ibe yindawo engabizi mali inqwenelekayo yomgangatho osetyenziselwa ukuthengisa kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso.
Ngaphandle kwenketho yokuba unedyasi engatyibilikiyo, ukugqitywa kwekhonkrithi okukhazimlisiweyo kuza neendlela zokhetho ezinomtsalane ukuhambelana neemfuno zakho zangaphandle.
Kukho iintlobo ngeentlobo ze Ipatio yekhonkrithi igqityiwe ungongeza ngokuxhomekeka kuyilo olufunayo. Unokongeza ubuqaqawuli kwipatio yakho engaphandle yoyilo olwenziweyo, imida, iibhendi, kunye nemigca yeeradial. Unokongeza imibala eyahlukeneyo kwezi patheni zinomtsalane ngokunjalo.
Ulungiso olungcono lwesiliphu
Ipatio yekhonkrithi ephelelwe lixesha kwaye ikhangeleka yanamhlanje ineendleko ezibanzi kuxhomekeka kwiimpawu ofuna ukuzongeza kwipatiyo yakho yangaphandle.
Nangona kungabanzima kakhulu emsebenzini, ikhonkrithi ekhonkrithiwe iponkrithi iyonke into enexabiso eliphantsi njengoko kungafuneki ukuba ubuyise umphezulu wakho rhoqo. Ngapha koko, ngumgangatho ophantsi kakhulu wolondolozo.
Uluhlu lwamaxabiso omgangatho wekhonkrithi olukhazimlisiweyo unokuxabisa ukusuka kwi-3 ukuya kwi-12 yeedola oko kukuthi kugqitywe i-3,000-grit kwaye kusetyenziswe ukumiswa kwesitywina Okwangoku, iithayile zinokuxabisa malunga ne-11 ukuya kwi-22 yeedola, ilitye lendalo kwelinye icala linokubiza malunga ne-20 ukuya kwi-50 yeedola.
Uqoqosho lwe- $ 3 ukuya kwi- $ 12 - Ngokwesiqhelo kunokuqaqamba okumodareyitha, umaleko omnye, kunye nebala elinombala kunye nolungiselelo lomhlaba oluncinci.
Uluhlu oluphakathi lweedola ezi-5 ukuya kwezi-8 -Ukugqiba kwe-glossier, amabala amabini anemibala, ipatheni yokufumana amanqaku esisiseko kunye nokulungiswa okuphezulu komhlaba.
Isiphelo esiphakamileyo se- $ 8 ukuya kwi-12 -Iineenkcukacha zokubala, imibala emininzi, kunye noyilo olucokisekileyo olunemibala emininzi elungiselelwe ngokubanzi ngokusila nokulungiselela umphezulu. Ukwenza ipolishiweyo kutyhilwe uyilo lwepatio ehlanganisiweyo unokongeza kwiindleko.
Ukukhetha phakathi kwekhonkrithi enamabala okanye e-polished? Ezi zimbini zifana kakhulu ngokokuhlala kwazo, ukubonakala kwazo, kunye nokugcinwa kwazo.
Umahluko ophambili phakathi kwezi ndidi zimbini zomgangatho wokubonakala kwazo kunye neendleko. Ikhonkrithi egcinwe kuyo inebala elinombala ukuze ibonakale kakhulu ngelixa ikhonkrithi ecoliweyo igudisiwe kwaye ipolishiwe. Ukongeza, iindleko zekhonkrithi ecoliweyo zinokubiza kakhulu xa kuthelekiswa namabala.
Itshathi yokuthelekisa: Ikhonkrithi egciniweyo Ikhonkrithi ephothiweyo
Imibala Imibala yesiqhelo Imibala yesiqhelo
Iindleko Zokufaka Ixabiso elincinci Ixabiso elininzi kunye nomSebenzi
Iyawakhaba amanzi Ewe Ewe
Ulondolozo Iimfuno zokuphandwa amaxesha ama-2 ngonyaka Itywina elikhuselayo kufuneka lisetyenziswe rhoqo kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-10
Ukucoca Umtshayelo / uMop okanye iMveliso eziCocayo eziMnene Umtshayelo / uMop okanye iMveliso eziCocayo eziMnene
Eyona ilungele ngaphandle Kufuneka usebenzise amabala angaphandle Imigangatho enePolish ePhakamileyo isenokuba yiSlippery
Ukuzinza Ukuhlala ixesha elide kodwa kunokukrwitshwa, ukuDala kunye nokuFiphala, ngakumbi kwiiNdawo eziPhezulu zeTrafikhi. Iyahlala ngakumbi kunekhonkrithi egciniweyo
Ukuchithwa kwekhonkrithi yindlela eqhelekileyo yokufaka umphezulu wekhonkrithi ngemibala eya kuhlala ikhanya kwaye idlamkile iminyaka emininzi ezayo.
Ukukhethwa koyilo kuninzi, phantse kungapheli, njengoko wena okanye umntu owenza lo msebenzi unokuba noyilo loyilo. Unokukhetha ukuyichaphazela ngokwendalo okanye usebenzise ipensile ukwenza iphethini oyifunayo.
Zininzi iindlela zokuphumeza iziphumo ezizodwa, ke awunakukhathazeka malunga nokuphumeza uyilo olifunayo kwimigangatho yakho.
Ikhonkrithi egciniweyo inokulinganisa imarble, amatye endalo, okanye neenkuni. Ubungakanani bemibala bunokuguqulwa ngokulungelelanisa isisombululo sebala.
Uyilo lwebala lekhonkrithi luhlala ixesha elide kakhulu nakwimimandla apho kukho ukugcwala kweenyawo ezinzima. Ngokomelela njengombandela, uyilo lufuna ukugcinwa okuncinci, ukuba kukho, ukugcina umnini-mali imali ezantsi kwendlela.
Ikhonkrithi egciniweyo, ngelishwa, ayabelani nobungqingili obufanayo, iyathandeka ekukrwemeni, ngakumbi kwiindawo zeendlela. Imibala kunye nepeyinti nazo zihlala ziphela.
Phakathi kwekhonkrithi enamabala kunye nekhonkrithi epholileyo, le yokugqibela iselona hlobo lubalaseleyo lomgangatho ngenxa yenkqubo yokufaka ebanzi. Ixesha langaphambili lifuna ulondolozo ngakumbi xa kuthelekiswa nolokugqibela.
Kulungiselelwe abo bafuna enye indlela, a ipatio yekhonkrithi enesitampu inokuba nomtsalane. Olu hlobo luhlala ludibanisa ukujongwa kwekhonkrithi enamabala kunye noyilo loyilo olukhethileyo.
iringi yedayimani ecocekileyo ekhaya
Ngaba ikhonkrithi ephihliweyo yePatio esemgangathweni ityibilika xa imanzi?
Sebenzisa umvavanyi we-pendulum endaweni yokuxhomekeka kwi I-ANSI A137.1 /A326.3, kugqityiwe kwelokuba ikhonkrithi ecoliweyo inokutyibilika xa imanzi, kodwa ngokubanzi ikhuselekile xa igcinwe yomile.
Uvavanyo lwe-ANSI lubonelela ngokuthelekisa phakathi komphezulu kodwa amathuba okuba umntu atyibilike okanye angatyibiliki kumphezulu womhlaba ocoliweyo awunakuqikelelwa.
Izinto ezinokudlala ngendlela emtyibilizi wepatio ekhonkxiweyo xa kumanzi ukufunyanwa kweenyawo, ukunxiba, ukungcola, ulondolozo, kunye neengcebiso zabavelisi. Ke ngoko, eyona ndlela yokuthintela naziphi na izehlo kukusetyenziswa kwesixhobo sokuthintela isiliphu okanye ukutyabeka.
Ikhonkrithi ecoliweyo ihlala iqinisekisiwe ukuba ihlala ubuncinci iminyaka engama-20 kodwa inokuhlala ngokulula ngobomi bayo ngononophelo nolondolozo olufanelekileyo.
Imigangatho yekhonkrithi egciniweyo, inokufuna ulondolozo lonyaka, ngakumbi ngokutywinwa kunye nokuxhonywa kwakhona. Kodwa imigangatho ekhonkrithi ibala inokuhlala ikhulu leminyaka. Ukungahoywa okanye ukutywinwa okungalunganga kunokubangela ukuba amabala aphele, ngakumbi kwiindawo ezigcwele abantu.
Umgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo lukhetho olunengqondo ngakumbi ukuba ufuna ukutyibilika kumgangatho wepatio onokufikeleleka. Nangona ukhumbula ukuba yindawo enzima kwaye iyabanda ukuhamba kuyo. Kodwa ngaphandle koku, ukutshintshela kumgangatho wekhonkrithi opholileyo ukusuka kumgangatho wemithi okanye iithayile kunokukhanyisa ubomi bakho bangaphandle budala ubukeka bale mihla nobuhle.
Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zemigangatho yepatio, imigangatho ekhonkxiweyo kulula ukuyifaka xa kuthelekiswa neethayile okanye ukwakhiwa ngamatye, umphezulu obutofotofo ukwathetha ukuba akufuneki ukhathazeke ngotyheli okanye imigca yemozulu yegrout. Sinokuthelekisa okunzulu ngakumbi iipavile vs iipatio zekhonkrithi Apha.
Ngaphezu koko kukho ulondolozo oluncinci olufunekayo, kwaye umphezulu uhlala uhlala ubonakala ucocekile emva kokucoca ngokucokisekileyo.
Ukuba uyicwangcisa njengeprojekthi ye-DIY, kuyacetyiswa ukuba ukufaka umgangatho wekhonkrithi opolishiwe kwipatio yakho kufuneka kwenziwe ziingcali.
Umsebenzi obandakanyekayo kulungiselelo lomphezulu, izixhobo ezibizayo, kunye nokusilela kolwazi kukhetho loyilo zizizathu zokuba umgangatho wekhonkrithi ophekiweyo we-DIY ayisiyonto iluncedo.
Enye indlela eya kwipatio yekonkrithi epholileyo yi Uyilo lwe-epoxy patio ebonelela ngeempawu ezininzi ezifanayo.
Ungasusa njani iindawo zokucheba kwindawo yeebikini
izimvo ezintle ze-valentine ngaye
Iivesi zebhayibhile malunga nothando ubudlelwane
Yintoni onokuyifumana kwisithandwa sakho ngesikhumbuzo
Iingoma zokudanisa ezingoyise ezilungileyo